Magaalada Borama ee xarunta gobalka Awdal ee Somaliland waxaa maanta ka dhacay isku soo bax balaaran oo ay soo qaban qaabisay Hay’ada horumarinta jidadka gobolada Awdal iyo Salal ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loogu yeero ASARDA. « SAWNEWS NETWORK
« TAARIIKH NOLOLEEDKA MARXUUM MAXAMED XASAN MATAAN
QUQULKA WUFUUDA KA QAYB GALAYSA AASKA MARXUUM MAXAMED XASAN MATAAN OO LAGA »
Magaalada Borama ee xarunta gobalka Awdal ee Somaliland waxaa maanta ka dhacay isku soo bax balaaran oo ay soo qaban qaabisay Hay’ada horumarinta jidadka gobolada Awdal iyo Salal ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loogu yeero ASARDA.
Posted by Sawnews.tk on March 25, 2010
Sawnews(Borama)Hay’adaan oo ay ku mideysan yihiin Aqoonyahano, Ganacsato, Culumo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada goboladaan Awdal iyo Salal ku dhaqan ayaa waxa loo dhisay inuu wax weyn ka qabto dhismaha waddooyinka sida xoogan u burbursan ee labadaan gobal, gaar ahaan wadada isku xirta Dilla iyo Borama.
Isku soo baxaan balaaran oo ka dhacay fagaaraha Kheyriyada ee magaalada Borama ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Duqa magaalada Borama Mudane Cabdiraxmaan Shide Bille, waxuuna aad ugu dheeraaday dhibaatada wado la’aan ee ka taagan gobolada Awdal iyo Salal, gaar ahaan wadada isku xirta Dilla iyo Borama.
Duqa Borama waxuu ka codsaday shacabka ku dhaqan Borama iyo guud ahaan gobolada Awdal iyo Salal inay u istaagaan dhismaha waddooyinkooda, qof kastana waxuu awoodo keeno.
Waxaa sidoo kale ka hadlay isku soo baxaya Guddoomiyaha Hay’ada ASARDA Prof. Xasan Cali, waxuuna si qiiro ku jirta ugu codsaday dadweynaha labadaan gobal ku dhaqan inay iskaa wax u qabso sameeyaan oo ay dhistaan wadooyinkooda.
“Qof walba haduu 500 oo Land ah keeno, wax weyn ayay qabaneysaa, waxaana ku dhisi karnaa wadada, qof walba haduu soo qaato qalabka dhismaha oo noogu deeqo xoogiisana taasna wax weyn ayay qaban kareysaa” ayuu yidhi Prof. Xasan Cali.
Sidoo kale, waxaa banaanbaxa ka hadlay Sheekhul Baladka Borama Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jowhar, waxuuna si weyn ugu dheeraaday sida Diinta Islaamka ka qabto dadka oo wax qabsada cid kalena wax ka sugun.
Sheekh Cabdilaahi waxuu sheegay in qofkii Dhagax yar ka qaada wadada ajir aan lasoo koobi kareyn uu helaayo, qofkii wada burbursan dhisana ajir ka badan uu helaayo, waxuuna shacabka ugu baaqay inay wax qabsadana oo iyaga isku tashtaan.
Sidoo kale, waxaa xaflada ka hadlay Prof. Saleebaan Axmed Guuleed oo ah Guddoomiyaha Jaamacada CAMUUD, waxuuna ku booriyay shacab weynaha kasoo qeyb galay isku soo baxa inay dhexda u xirtaan sidii waddooyinkooda u dhisan lahaayeen.
“Ajaanibta Jaamacadeena u timaada, marka Diyaaradaha Hargeysa laga soo dajiyo oo Borama ku keeno gawaari, soona marsiino wadada aad aragteen ee Dilla iyo Borama u dhaxeysa, waxey yimaadaan Borama iyagoo lafaha wada xanuunaya, waxeyna ka weydiiyaan Musqul marka u horeysa, muddo 4 saac marka ay nastaan kadib wada sheekeysanaa” ayuu yidhi Prof. Saleebaan.
Prof. Saleebaan Axmed Guuleed waxuu sheegay inuu aad u yaqaan Guddoomiyaha ASARDA Prof. Xasan Cali waxuuna ku tilmaamay Geesi aan la loodin karin isla markaana ka go’an tahay inuu qabto wax kasta oo uu ka shaqeynayo, waxuuna carabka ku adkeeyay inuu ahaa Prof. Xasan Cali aasaasihii Jaamacada CAMUUD.
Waxaa Gabay aad loogu madax ruxay kasoo jeediyay isku soo baxaan Abwaan Budin oo ah Abwaan aad u da’a yar, waxuuna gabaygiisa kusoo qaatay dhibaatada wada la’aanta leedahay.
“Ganacsatada ama Shacabka gawaarida 4WD markaad keensaneysaan xagee ku wadeysaan maku fakirteen wadada marsiineysaan misa cirka ku duulineysaan” ayaa kamid ahaa erayada aadka dhagaha shacabka usoo jiitay ee Abwaanka yidhi.
Sidoo kale, Isku soo baxa waxaa ka hadlay Salaadiinta Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal iyo Ibraahim Jaamac Samatar waxeyna labaduba ku dheeraadeen dhibaatada wada la’aanta waxeyna sheegeen inay haboon tahay in lacagta Qaadka lagu cuno ee Itoobiya u xarooto la joojiyo laguna dhiso waddooyinka.
“Toddobaad kaliya ayaa nagu filan hadaan joojino lacagta aan Qaadka ku iibsano, waxaan hubaa in lacagta Toddobaadkaan aruurino ay dhisi karto waddooyinka” ayuu yidhi Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar
Sidoo kale, waxaa isku soo baxa ka hadlay Haween aad u qiireysanaa, waxeyna sheegeen inay Haween ahaan balan qaadayaan in lacag ay aruuriyaan taasoo qeyb ka noqoneysa lacagaha lagu dhisayo waddooyinka, waxeyna raga ugu baaqeen lacagaha ay Qaadka ku cunayaan inay waddooyinka ku dhistaan.
Gaba-gabadii waxaa isku soo baxa soo xiray, Guddoomiyaha gobalka Awdal Maxamuud Sheekh Cabdilaahi Cige waxuuna isna hadalkiisa ku biiriyay baaqyadii kor aan kusoo xusnay ee ujeedkooda ahaa in shacabka oo is kaashada ay dhistaan waddooyinkooda, waxna ka sugin hay’ado iyo dowlado shisheeye.
Isku soo baxaan ayaa kusoo gaba-gaboobay jawi wanaagsan, iyadoo laga dheehan karayay dadkii kasoo qeyb galay ee aadka i tirada badnaa inay ka go’an tahay inay garab istaagaan Hay’ada horumarinta jidadka gobolada Awdal iyo Salal ee ASARDA.
This entry was posted on March 25, 2010 at 12:02 pm	and is filed under News (Warka).